Kusvirwa kwandakaitwa nyoro muharare neshamwari yangu! - Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Kusvirwa kwandakaitwa nyoro muharare neshamwari yangu!
Kusvirwa kwandakaitwa nyoro muharare neshamwari yangu! Ndakakura muHarare asi pandakapedza chikoro ndakayenda kunogara kuBotswana for about 3 years chaidzo. Vabereki vangu vainge vakugara kumusha saka time yandaisvika ndainge ndisingakwanise kusvika ndichipfuurira ndokubva ndakutaura naKilla mumwe mukomana wandainge ndakadzidza naye. Killa yainge iri nickname yaakapihwa kuchikoro mumwe musi wainge arova munhu akayenda muhospital achibva apotsa ayitwa expelled, vanhu vakawanda vaimutya asi inini se babe raayida it was different. Tainge tisina kudanana nguva yakareba zvekuti hatina kurara tese patime yacho.
Killa ainge ave successful ari owner wegym semunhu ayida zve body building kubva kudhara. Ndakataura naKilla ndikamuti ndaidawo pekurara ndakamiririra the next day kuti ndiwane bhazi rekuyenda kumusha kunowona vabereki vangu, answer ndakaipihwa ipapo zvikanzi you are welcome kana for 20 years chaidzo. Shockly Killa ainge achiri kundida inini panguva iyoyo handizive how I felt nekuti tainge tarasa communication for long zvekuti ndainge ndisingazive zvaiyitika muhupenyu hwake and ininiwo ndakamboita boyfriemd but hazvina kushanda
Ndakasvika kumba kwaKilla iri Thursday ndikamuudza kuti ndaizoyenda kumusha weekend akabva ati hapana chakaipa.Killa ainge ane vana two hanzi ndainge ndaroora asi mukadzi wacho was a gold digger according to him aingotenga zvisina muganhu. Ndikabva ndaseka ndikati ungatichii haasisipo kuti azvimirire, takakurukura about the past ndikavhunduka nguva dzakutova after midnight. Ndakaratidzwa kwekurara, ainge ane imba yake yakanaka kuzoti mota imi, aifamba ne BMW X5 apa mugarage mainge mune Toyota Fortuner, the guy was big saka aidawo zvihombe. Iniwo ndaga ndakasimba kubva last time yaakandiwona ndakanzwa munhu achimedza mate pandakasimuka kuti ndinorara, zvikanzi what happened to us, ndikangoti handizive sha totaura magwana, “Good night”.
Magwana acho makuseni ndakamuka kuyenda kubathroom ndikasvika munhu akatovhura hake door mvura ichi runner ndikatofunga kuti hamuna munhu rega ndivhure, pakuvhura bathroom curtain so ndiwone munhu arimo akatorara mu tub zimboro rakamira, ndakavhunduka ndichibva ndadonha Killa achibva abuda mutub kuti anditarise, paakapfugama kumusoro kwangu kuti andisumudze zimboro rake rakandigumha pamuromo, zviya zvinonzi vanhu vanoyenda kugym vane mboro diki kunyepa kuya Killa anga ane mazimhasuru plus zimboro raityisa, ndakanyepedzera kunge ndakatsinzinya ndichipota ndichivhura maziso zvishoma.
Killa akanditakura ndokubva ayenda neni mudinning achibva andirarisa pasofa ndipo pandikabva ndamuka, haana kana kuratidza kunyara akatoramba akagara next to me achibvunza if I was okay, ndakamutarisa ndichibva ndamuti please pfeka hembe urikunditadzisa kupindura.
Akabva anditi chii chausingazive apa hausi mwana mudiki, ndikati I know but ndane nguva ndisati ndawona mboro please, ndakaita kunge ndamuti gara wakadaro. Ndakatanga kukiswa zviri gentle ndakabhoda kumurambidza but zemo rangu rakandikurira ndokubva ndakumukisawo as well zvekuti kubva ipapo takatanga kubatana ndipo pandikaisa zimboro rake mumuromo ndichibva ndatanga kurisvisvina ah ah ah masasi eharare handisati ndanakirwa nekuyamwa mboro zvakadaro.
Killa akandirasa pasofa ndokubva asimudza makumbo angu ndokuisa pamafudzi ake ndokubva apinzwa zimboro rake, ndakanzwa beche richiita kutsemukira mboro ichinyura mukati. Ndakaridza mhere nekunakirwa ndichibva ndatunda ndipo pandikatanga kukoirwa slowly ndokubva awdzera speed ndichibva ndatunda ipapo. Ndakazoita rimwe week ndisati ndayenda kumusha ndainge ndakutoita kunge mukadzi wake, pandakazoyenda kumusha ndainge ndapi Toyota Fortuner ndiyo yandakayenda nayo ndichi driver.
Pfungwa dzangu dzainge dzakumhanya ndisingazive kuti ndodzokera kuBotswana or ndodzokera kunoita mukadzi waKilla.
Kusvirwa kwandakaitwa nyoro
Previous articleKusvirwa naTicha mukomana webasa muKitchen – Part 1
Next articleNdakarohwa nyoro na Headmaster ndichitsvaga nzvimbo yemwana yechikoro!